TORITENY Alahady 13 Aogositra 2017 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 13 Aogositra 2017
« Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo »
Daniela 3 : 19 – 30 / Matio 10 : 21 – 23 / Asan’ny Apostoly 14 : 19 – 28
Rehefa noravana Jerosalema dia isan’ireo lasa babo tany Babylona , Sadraka , Mesaka , Abednego. Noterena hiankohoka amin’ny andriamanitry Nebokadnezara izy 3 mirahalahy ireo saingy tsy nanaiky fa nifikitra tamin’i Jehovah Andriamanitra hatramin’ny farany.
Inona no tian’ny Tenin’Andriamanitra hambara amiko sy aminao amin’izao tantara izao?
Mandresy fijalina ny vavolombelon’ny Tompo satria : Miaina amin’ny fahatokiana an’Andriamanitra.
Sahy mijoro hatramin’ny farany ny vavolombelon’ny Tompo satria mahatoky an’Andriamanitra izany hoe : tsy hiova , tsy hivadika amin’Andriamanitra fa hifikitra foana na manao ahoana , na manao ahoana fivadibadihan’ny fiainana.
Nifikitra izy satria fantany loatra fa Andriamanitra velona no sady miasa no manavotra sy mamonjy azy, ka sahiny ny mamaly tsy hanatanteraka ny baikon’ny mpanjaka rehefa tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra.
Raha mandalo fotoan-tsarotra aho dia tokony hahatsiaro fa eo foana Andriamanitra mandray an-tanana ny adiko
Ny takina amiko dia ny mifikitra ka tsy hivadika Aminy.
Tsy maintsy mandalo fijaliana ny mpanompon’Andriamanitra raha mbola eo anivon’ny fiaraha-monina kanefa fadio ny miverin-dalana.
Tsy hovain’ny fiaraha-monina aho , fa nantsoina hanova fiaraha-monina.
Mandresy fijaliana ny vavolombelon’ny Tompo ka mampanaiky ny hafa hino an’Andriamanitra
Rehefa nafanaina im-pito ny lafaoro hanipazana azy 3 mirahalahy, dia nahagaga fa ny miaramila nanipy azy indray no maty, fa izy ireo kosa tsy nihontsona. cf and 26 – 28 . Mandresy lahatra ary mampanaiky ny hafa ny fijoroan’ny mpanompon’Andriamanitra hatramin’ny farany.
Namoaka didy Nebokadnezara fa tsy hanompo andriamanin-kafa afa-tsy Jehovah Andriamanitra irery ihany.
Aza matahotra, na inona na inona sarotra lalovana , mijoroa, matokia ary aza mivadika amin’Andriamanitra fa Izy handidy ny anjeliny aminao cf Sal 91 : 11
Ny tsy fivadihana amin’Andriamanitra hatramin’ny farany manoloana ny zava-tsarotra no mampanaiky ny hafa hino sy hanaraka an’Andriamanitra.
Fehiny : Miaro antsika amin’ny alalan’i Jesoa Kristy Andriamanitra, manampy amin’izay rehetra ataoko Izy, na asa na fianarana sns….
RAMANANJAFY Yvon, Mpitandrina
Catégories :	Soratra Masina, Toriteny	/ par AnjGab 16 août 2017